ओली ज्यू, तपाईंलाई प्रधानमन्त्री भन्न पनि लाज लाग्छ – Nepal Press
ओली ज्यू, तपाईंलाई प्रधानमन्त्री भन्न पनि लाज लाग्छ
श्री ६ राष्ट्रपति, श्री ५ प्रधानमन्त्री, कार्बन कार्यकर्ता
२०७७ पुष २४ गते ८:३४
निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा तपाईंले उम्मेदवारको हैसियतले हामीलाई मतदाताका रूपमा पत्र पठाउनुभएको थियो । आज म नागरिकका हैसियतले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू तपाईंलाई पत्र पठाउँदैछु ।
मेरो देशका प्रधानमन्त्रीज्यूले घरघरमा खाना ल्याइपुर्याउँछन् । अब विदेशी भूमिमा सस्तो मूल्यमा परिश्रम बेचेर स्वाभिमान बेच्नुपर्दैन । दुईतिहाइको सरकार बनेपछि महिनैपिच्छे सरकार गिराउने र बनाउने खेलको अन्त्य हुन्छ भनेर म ढुक्क थिएँ ।
तर, सोचेजस्तो नहुँदोरहेछ । हँसिया–हथौडावाहक सिम्रिक झण्डा र सूर्य मतदान चिन्हको प्रचारमा हातमा डिजे समातेर ‘सही पनि एमाले, मै पनि एमाले’ भनेर मेरो गाउँको ५९ वर्षीय हर्कबहादुर निकै फुर्तिका साथ जुटेको थियो । सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू उता शहरतिर तपाईंको पनि उखान टुक्का मिश्रित भाषणले रौनक छाएको थियो । प्रचार र भाषणबाजीमा कुनै अपुग थिएन । भोजभतेरमा कमि थिएन । जनता जुर्मुराएका थिए । यसैको फलस्वरुप दुईतिहाइसहितको सरकार बन्यो । धेरैले गर्व गरे होलान् ।
संविधानको अपमान गर्दै सत्तास्वार्थको खेलमा नेपाली जनताको मतको हुर्मत उडाएर आफूलाई सर्वशक्तिमान बनाउने महत्वाकांक्षाले तपाईंले नयाँ नाटक मञ्चन गरेर सात दशक लामो संघर्षपछि बनेको संविधानलाई विघटन गरेर ‘कु’ गर्नुभयो । योभन्दा ठूलो अपराध के हुनसक्छ ?
तर, ती गर्व गरेका दिन वितेको धेरै भएको छैन । अहिले एकाएक पुरानो रोगको पुनरावृत्ति भएको छ । सरकार बन्ने र ढल्नेको कुनै ठेगान हुँदैनथ्यो । प्रधानमन्त्रीज्यूको मीठो भाषणबाट प्रभावित नेपाली जनताले आफ्नो अभिमत जाहेर गर्दै दुईतिहाइ दिलाए । दुईतिहाइ बहुमतको सरकार बनेयता समय–समयमा विभिन्न काण्डहरूमा– भ्रष्टाचार, अन्याय, अत्याचार, विभेद मात्र नभई किस्ताबन्दीमा संविधानको हत्या समेत गरियो । हुँदाहुँदै अन्तिममा संसद नै विघटन गरेर नेपाली राजनीतिलाई अस्थिर बनाइयो ।
तपाईं गुटको रक्षक र फरक मत राख्नेका लागि यति निर्मम हुनुहुँदोरहेछ, तपाईं कसरी यो संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको प्रधानमन्त्री निर्वाचित हुनुभो ? तपाईंकै शब्द सापटी लिएँ । तपाईंको यो हर्कतले मलाई पनि ताज्जुब लागेर आयो । तपाईंले पार्टीभित्रको आन्तरिक संगठनात्मक प्राविधिक व्यवस्थापन गर्न नसकेर पाँचवर्षे स्थायी सरकारको सबै सपना भुलेर नयाँ नाटक मञ्चन गर्दा कत्ति पनि लाज लागेन र ? तपाईंले त संविधानको रक्षक राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई पनि आफ्नै रबरस्ट्याम्प बनाएर ‘श्री ६’ बन्न प्रेरित गर्नुभो । योभन्दा ठूलो अपराध के हुनसक्ला र ?
तपाईंको कर्ममा मलाई कुनै भरोसा नै थिएन किनकि गणतन्त्र ल्याउँदा उखान वाचन गरेर बयलगाडा चढेर अमेरिका पुगिंदैन भन्नुहुन्थ्यो । बयलगाडा र गणतन्त्रलाई विश्लेषण गर्ने तपाईंको यो अचेत मानसिकताबारे हामीलाई चिन्ता थियो । एक सचेत नागरिकका लागि यही काफी थियो तर, तपार्इंको झूटो भाषण र झूटा सपनालाई नेपाली जनताले चिन्न सकेनन् । त्यही भूल थियो ।
तपाईंको भाषण एकातिर र कर्म अर्कोतिर हुँदोरहेछ । तपाईं यति गफाडी र झूटो बोल्नुहोला भन्ने विश्वास थिएन । तर, तपाईंको बोलीको ठेगान नहुँदोरहेछ । अब त मेरो देशको प्रधानमन्त्री भन्दा मेरो आफ्नै गरिमा घटेर आउँदैछ । मलाई लाज लागिरहेको छ ।
निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा तपाईंले गरेको भाषण, तपाईंका घोषणापत्रहरू सबै सुरक्षित छन् । तपाईंले समृद्धिको झूटो नारा लगाउनुभो । पानीजहाजदेखि, ग्याँसपाइपका समेत सपना बाँड्नुभो तर अहिले तपाईंका कर्म हेर्दा जताततै भ्रष्टाचार, अन्याय, अत्याचार, विभेद र कमिशनको जग बसाल्नुभो । किस्ताबन्दीमा संविधानको मर्म र भावानामाथि नै धावा बोल्नुभो । काण्डैकाण्ड गर्दै नयाँ इतिहास रच्नुभो र जगहँसाउनुभो । गर्दागर्दा नेपाली मतदाताको अपमान गर्नुभो । यो व्यवस्थामाथि नै अविश्वास पैदा गराउनुभो ।
आजका दिनमा पुनः तपाईंका भाषण सम्झिंदैछु । तपाईंको समृद्धिको नारा, तपाईंको राष्ट्रियता कहाँ हरायो ? खोज्दैछु, कतै भेट्टाइनँ । आज सोध्दैछु वैशाख जेठको टन्टलापुर घाममा गिटी कुट्दै गरेकी सुत्केरी आमालाई सोधें, दीर्घरोगी भएको आर्थिक अभावमा हात फैलाइरहेको वृद्धलाई सोधें, कोरोना कहरका बीच स्वदेश फर्केर पुनः विदेशका लागि लाम लागेको युवालाई सोधें तर कतै पनि समृद्धिले छोएको भेटिएन ।
राष्ट्रियताका सन्दर्भमा सबै घटनाक्रम हे¥यौं कतै शिर ठाडो भएन । हुँदाहुँदै पार्टीको गुटबन्दी मिलाउन, संसद विघटन र पुनःस्थापना गराउनका लागि समेत प्रत्यक्ष रूपमा रअ प्रमुख सामन्त गोयल र चाइनाकी राजदूत होउ यान्छी समेतको दौडधूपले मलाई लाग्छ तपाईंको राष्ट्रियता हाटबजारमा कौडीको मूल्यमा बेचियो । न त समृद्धि, न त राष्ट्रियता, न त स्थिर सरकार नै । तपाईंबाट के आश गर्नु ? तपाईंका हरेक वाणीहरू झूट प्रमाणित भए ।
अझ हरेक दिन खाडी मुलुकतर्फ गएर रोजीरोटी गर्नेहरूको भीड उस्तै छ । पैसा कमाएर घरधन्दा चलाउने योजनाकार नेपाली युवाहरूको सपना बाकसमा लास बनेर फर्किएको सत्य घटनाहरू प्रधानमन्त्रीज्यूका सामु छँदैछन् । सेवा सहजता र विकास कुरेर बसेको मेरो गाउँको अवस्था उस्तै छ । काम खोज्ने कामले लखतरान परेका युवाहरूको दैनिकी पनि उस्तै छ । फेरियो त शासकहरूको मुहार, शासन भने उस्तै छ ।
अरू बेलाभन्दा यो बेलाको सरकारमा केही भिन्नता भने देखिएको छ । केही गर्न नसके पनि प्रधानमन्त्रीज्यू आफ्नो भाषणमार्फत मतदाताहरूलाई चुड्किलासहितको सेवा प्रदान गरिरहनुभएको छ । यसमा हाम्रो गाउँका गरीब जनता सन्तुष्ट हुन सक्दैनन् ।
गल्ती भए माफ दिनुहोला प्रधानमन्त्रीज्यू, गरीब जनता भोको पेटलाई पटुकाले कसेर सधैं चुड्किला सुनिरहन सक्दैनन् । दुर्गम बस्तीमा बस्ने दाजुभाइको सानो झुप्रो थियो । त्यो पनि यसपालिको हावाहुरीको वेगले उडाएर लग्यो । उसका लागि खुला आकाशको बास भएको छ । साना नानीबाबुहरूलाई चिसोले निमोनिया भैसकेको छ । प्रधानमन्त्रीज्यू, तपाईं पानीजहाजको कुरा गर्नुहुन्थ्यो, अझै पनि गाउँमा घण्टौं लगाएर पानी लिन पँधेरो जानुपर्छ । अब भन्नुस् म पानी जहाजको सपना देखेर पानी खान छोडिदिऊँ ?
आजकल विद्यालय पढ्ने बहिनीहरू बाहिर निस्कन डराउँछन् । उनीहरू झिसमिसेमा पँधेरोसम्म पनि जान मान्दैनन् । स्कूल कलेज पु¥याउन जानुपर्छ । आजकल उनीहरू बाघ–भालुसँग भन्दा मान्छेहरूसँग ज्यादा डराउँछन् । उनीहरूलाई सबैभन्दा ठूलो डर त यो देशको सरकारसँग लाग्छ । हाम्री गाउँकी चेलीबहिनीहरूको अविश्वास अपराधीसँगको मात्र होइन, सरकारसँगको पनि अविश्वास हो ।
नेताले सपना देख्न र बाँड्न पनि पाइन्छ । तर, सस्तो लोकप्रियताका निमित्त तपाईंले बाँडेका सपनाहरूले गाउँका हजुरबुवा, हजुरआमाहरू सरापिरहेका छन् । हजुरले दोब्बर बनाउने भनेको वृद्ध भत्ता जतिको त्यत्ति छ । उनीहरु सधैं छाती पिटेर रोइरहेका छन् । आजकल हजुरको लागि जिन्दावाद र मूर्दावादको नारा लगाउँदै हिंडेको मेरो गाउँको हर्क छाती पिट्दै रोइरहेको छ । हजुरको कार्यकर्ताले खोलीखोलामा पुल निर्माण गरिदिने कुराले हजुरको पार्टीलाई ढुक्क भएर मतदान गरेका थिए । तर, त्यो खोलीखोला कार्यकर्ताका लागि खाने भाँडो बनेको छ । तल्लो गाउँदेखि साना नानीहरूले करिब एक घण्टाको बाटो हिंडेर स्कूल जाने दिन पनि जस्ताको तस्तै छ ।
म आजकल सोच्न बाध्य हुन्छु– किन, यो मामिलामा तपाईं चुक्नुभयो ? सरकारको संवेदनशीलता किन हराएको हो ? निर्मलाको हत्याकाण्ड कता हरायो ? सुनकाण्ड के’भा हो ? वाइडबडी रवीन्द्रजीसँगै गएको हो कि ? अनि एउटा कलाकारले नेता र सरकारको असली चरित्रको पर्दाफास गर्दा अरिंगालहरूको धम्की आएछ । किन, लोकतन्त्रमा कलामाथि अंकुश लागेकै हो र ? होइन भने किन सरकार न्याय दिन डगमगायो ?
तपाईंको उखान टुक्का मिश्रित भाषणमा निकै मिठास थियो । बोल्ने बेला त निश्चय पनि यी कामहरू हुन्छन् जस्तो लाग्थ्यो होला । तर, आज हजुरको पार्टीलाई मतदान गरेका जनता अहिले सुन्न नमिल्ने गरी एकोहोरो गाली गरिरहेका छन् । मलाई पनि चिन्ता लाग्छ मेरो देशको प्रधानमन्त्रीको गरिमामय पदमाथि जे पायो त्यै गाली सुनेर । कहाँ हरायो प्रधानमन्त्रीज्यू तपाईंको राष्ट्रियता ? किन यो देशमा फेरि अशान्ति नै मच्चाउने खेल हो कि ? कम्युनिष्ट आन्दोलन भनेर १७ हजारका टाउका गिंडिए । फेरि पनि के खोजेको हो ?
तपाईंको उखान टुक्का मिश्रित भाषणमा निकै मिठास थियो । बोल्ने बेला त निश्चय पनि यी कामहरू हुन्छन् जस्तो लाग्थ्यो होला । तर, आज हजुरको पार्टीलाई मतदान गरेका जनता अहिले सुन्न नमिल्ने गरी एकोहोरो गाली गरिरहेका छन् ।
प्रधानमन्त्रीज्यू, विभिन्न अभ्यास गर्नुभो । तपाईंका कार्बन कार्यकर्ताहरू सामाजिक सञ्जालमा तपाईंले गरेको अपराधको प्रतिरक्षा गर्न फरक मत राख्नेका लागि अरिङ्गाल बन्दैछन् । तपाईं गलत गर्दै जानुहुन्छ, तपाईंका कार्बनकपीहरू तपाईंको प्रतिरक्षास्वरुप सडकमा नारा लगाउँदै हिंड्छन् । संविधानको ‘कु’ गर्नुभो तर, तपाईंका भजनगायकहरू चोकचोकमा दिपावली मनाएर हिंडेको देख्दा मलाई पनि ताज्जुब लाग्दैछ । जे गर्नुभो त्यो नेपाली जनताको आँखामा अपराधतुल्य छ ।
नेपाली जनताको गुञ्जयमान गर्ने थलो भत्काइदिनुभो । अब योभन्दा ठूलो अपमान र अपराध के होला र ? हामीले निर्मम भए भनेर राजा फाल्यौं । तर, त्योभन्दा निर्मम ‘श्री ६’ विद्या भण्डारीज्यूलाई बनाउन प्रेरित गर्नुभयो । तपाईंको यो सर्वसत्तावादी चरित्र र महत्वाकांक्षाको नाटक मञ्चन हामी हेर्न सक्दैनांै । अब एक, दुई, तीन तपाईं झूटो बोल्न बन्द गर्नुहोस् !
प्रकाशित: २०७७ पुष २४ गते ८:३४
3 thoughts on “ओली ज्यू, तपाईंलाई प्रधानमन्त्री भन्न पनि लाज लाग्छ”
Sarjan Tharu says:
ukhan tukka, kp m oli afno kidnic partya ropan garda gardai deshko dhukuti sakyo sakyo, nepali amako hajarau saputko balidalile bhayeko tyattro uplabdhi pani saknebho, yo kp oli maryo bhane yaslai swargama ta ke narkama pani bas mildaina ki jasto lagchha malai.
Yasto ghatiya pralaap chhapera patrikale aafno star ghataaunu ka saathai hamro samay ko noksani garyo.